Sawiro:Taliyaha Ciidanka Booliska oo tababar u furay Ciidanka ilaalada nabad gelyada wadooyinka Trafficada – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-41440 single-format-standard">
Muqdisho:Xukun dil ah oo lagu riday rag katirsan Shabaab
Ciidamada dowlada oo ku guulaystay inay soo qabtaan rag katirsan shabaab
Luuq:Dab Sababay qasaaro Hantiyeed ayaa kdhacay Degmada Luuq ee Gobolka Gedo
Daawo:Qoyskaaga Ka dhig Mid Is-badelka La socda.
Daawo:qaabkii Muqdisho loogu soo dhaweyey Taliyaha Booliska Jabuuti
Home / Wararka Maanta / Sawiro:Taliyaha Ciidanka Booliska oo tababar u furay Ciidanka ilaalada nabad gelyada wadooyinka Trafficada
Sawiro:Taliyaha Ciidanka Booliska oo tababar u furay Ciidanka ilaalada nabad gelyada wadooyinka Trafficada
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, ayaa maanta tababar u furay Askar iyo Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska, gaar ahaan Ciidanka ilaaladda Nabad gelyada Wadooyinka ee Taraafiko.
Ciidankaan, ayaa muddada Tababarkaan uu socda oo ah Toban maalmood waxay baran Doonaan Casharo horay ay usoo qaateen oo hadda dib loogu celinayo, kuwaasi oo kala ah Sharciyada Ciidanka Taraafikada, ka hortagga Shilalka gaadiidka iyo fududeynta isu-socodka Gaadiidka kala duwan.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo tababarkaasi ka hadlay, ayaa u mahad celiyey Taliska Ciidanka AMISOM oo tababarka bixinayo, isaggoo xusay in la kordhin doono tababarada noocaan oo kale ah, si kor loogu qaado aqoonta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, isbadalna loogu sameeyo habka shaqo ee Ciidanka.
“Si kor loogu qaado aqoonta Ciidanka Booliska, ayaa maanta waxaa tababar u furay Saraakiil iyo Askar ka tirsan Ciidanka ilaalada nabad gelyada wadooyinka ee Taraafiko,waxaan kordhin doonnaa tababarada kala duwan ee Ciidanka ay qaataan, taasi oo aan ku dooneyno in isbadal aan ku sameyno habka shaqo ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed” ayuu yiri Gen Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko.
warbixintii warbaahinta qaranka
← Previous Story Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa daah-furay kulanka wadatashiga
Next Story → Sawiro:Hobyo Wasiirka Dekadaha soomaliya oo Waheliyaan wafti ka socda dekadaha Qatar ayaa gaaray